radiosomit.com – Page 2
Home»Author: radiosomit.com (Page 2)
Juventus Oo Guul Ka Gaadhay Spezia
Kooxda Juventus ayaa guul ka gaadhay kooxda Spezia kulan ka tirsanaa horyaalka Serie A. Juventus ayaa dhibaatoonaysay tan ilaa bilowgii xilli ciyaareedka iyaga oo aan gaadhin guulo muhiim ah taas oo keentay in ay Juvntus ku jirto kaalinta 12-aad ee kala saraynta horyaalka. Daqiiqadii 28-aad ayay Juventus dhalisay goolka 1-aad ee ciyaarta waxana u dhaliyay xiddiga Moise Kean kaas oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa kana dhigay ciyaarta 1/0 ay kooxdiisu ku hogaaminayso ciyaarta. Kooxda Spezia ayaa daqiiqadii 33-aad keenay goolka bar-baraha waxana u dhaliyay xiddiga Emmanuel Gyasi kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/1. Kooxda Juventus ayaa ahayd kooxda fiican iyaga…
Somaliland: “Nama khuseeyaan doorashooyinka Soomaliya, mana aqbaleyno”
Waan ka xumahay in lagu tilmaamo cabashada shacabka Dhoobaweyn iyo Shilaabo ‘mu’aamarad’ ama conspiracy theory. Dhibaatada shidaalka la xidhiidha ma aha wax cusub, shacabka waxaa wali quluubtooda ku suntan eheladoodii la diley laga bilaabo xilligii shirkada Garmarlka ‘Gewerkschaft Elwerath’ ay 1963 ka hawlgaleysey Jeexdin- 7 ruux ayaa la diley, waxaa ka mid ahaa Gaarne Ali Tarey, curadkiisii iyo 5 nin oo la socotay. Maalintaa laga bilaabo dhibaato isdaba joog ah ayay shacabka ku hayeen shirkadaha shidaalka baadha iyo waliba ciidamada Ethiopia. Wali wax isla xisaabtan ma dhicin. Warbixintii ku saabsanayd xanuunada ka dhashay goobaha shidaalka een soo saarnay sannadkii hore…
Hadal haynta ugu wayn ee maalmahan dunida ka taagan waa kala wareegga Juqraafiga siyaasadeed (geopolitical shift) ee uu Maraykanku sameeyey iyo sida uu mid ka mid ah saaxiibbaadiisii ugu dhowaa dhabarka kaga wareemay, waa sida uu wasiirka arrimaha dibedda Faransiiska u dhigaye. Faransiiska wuxuu 2016 heshii la galay Austrlia in uu sameeyo 12 gujis oo ku kacaya adduun dhan $60 bilyan, laakiin Australia ayaa heshiiskii ka baxday, waxeyna Maraykanka iyo Ingiriiska wada saxiixdeen heshiis cusub oo loogu dhisayo Gujisyo ku shaqeeya Nukliyeerka. Austrlia ayaa noqotay dalkii labaad oo uu Maraykanku la wadaagayo tiknoolajiyad millateri oo xasaasi ah. Ingiriiska oo qura…
waxa Wareega 4-aad Ee Carabo Cup-ka, Iska xaadiriyey Liverpool & Man City Liverpool
Kooxda Liverpool ayaa guul ka gaadhay kooxda Norwich City kulan ka tirsanaa wareega 3-aad ee tartanka Carabao Cup-ka. Kulanka ayuu Klopp ku soo galay shax u yar xiddigaha da’yarka ah ee kooxda isaga oo nasiyay xiddigaha kooxda 1-aad ka hor kulamada adag ee ay kooxdiisu ciyaari doonto. Liverpool ayaa si deg-deg ah ku bilaabatay ciyaarta iyada oo uu xiddiga Takumi Minamino dhaliyay goolka furitaanka daqiiqadii 4-aad ee ciyaarta isaga oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa. Reds ayaa lagu helay rikoodhe iyada oo ay Norwich heshay rikoodhe laakiin waxa rikoodhada si cajiib ah u badbaadiyay Goolhayaha kooxda Liverpool. Qaybtii dambe ayay Liverpool…
maxa Sababay in Barcelona Dhibato Iyo Rafad ka marto cay rinta…
Tababaraha Ronald Koeman ayuu cadaadisku ku sii badanayaa waxana ay kooxdu ku dhibaatoonaysaa in ay shaqada ka caydhiso tababaraha sabab la xidhiidha xaalada dhaqaale ee ay ku jirto. Barcelona ayaa bar-baro kala kulantay Kooxda Granada kulan ka tursanaa horyaalka La Liga taas oo cadaadiska ku sii kordhisay tababaraha reer Holland. Kooxda ayaa lala xidhiidhinayaa tababaraha xulka qaranka Belguim ee Roberto Martinez kaas oo dhankiisa diyaar u ah in uu noqdo badalka Ronald Koeman hadii ay kooxdu caydhiso. Laakiin Barcelona ayaan haatan shaqada ka caydhin karin Koeman sabab la xidhiidha in ay kooxdu ku qasbanaan doonto in ay tababaraha jeebka ugu…
Robert Lewandowski Oo Ka Hadlay Wararka La Xidhiidhinaya Premier League.
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa ku adkeystay inuusan u baahneyn inuu isku muujiyo dal kale iyadoo la isla dhexmarayo ku biiritaanka Premier League. Mustaqbalka xiddiga reer Poland ee kooxda heysata horyaalka Bundesliga ayaa su’aal la geliyay dhawaanahan, iyadoo heshiiskiisa Bavaria uu dhacayo 2023. Lewandowski ayaa lala xiriirinayay kooxaha Liverpool, Manchester City iyo Real Madrid, laakiin 33 jirkaan ayaa haatan hoos u dhigay ka hadalka ka bixitaanka Bayern Munich. Isaga oo la hadlaya warbaahinta kadib markii uu gudoomay abaalmarinta kabta dahabka ah ee yurub ayuu yidhi”Ma ahan inaan isku caddeeyo horyaal kale”. “Waxaan la tartami karaa kan ugu fiican horyaalada…
maxa laka haysto Bernd Leno Iyo Arsenal…?
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay soo dhaweyn doonto dalabyada ku habboon goolhaye Bernd Leno marka la gaaro suuqa kala iibsiga bisha Janury. Goolhayaha reer Germany ayaa ka baxay qorshaha Mikel Arteta waxana uu labadii kulan ee ugu dambeeyay Premier League kaydka u galay Goolhaye Aaron Ramsdale kaas oo shabaqiisa ilaashaday laba kulan. Waxa intaas sii dheer in heshiiska Leno ee haatan dhici doono 2 sano kadib waxana ay kooxdu go’aan ka gaadhaay mustaqbalkiisa kooxda. Sida laga soo xigtay Eurosport, Leno ayaa laga yaabaa in uuna Leno sii joogin Arsenal ilaa dhamaadka heshiiskiisa waliba kooxdu iska iibin doonto Goolhaya 29…
Ciidamada Kumaandooska DANAB ee Ururka 5-aad guutada 16-aad ee xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Maamulka Jubbaland ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorsheysan si wadajir ah uga sameeyay Gobolka Jubbada Hoose. Ciidamada oo iskaashanayay ayaa howlgalka sigaar ah uga sameeyay deegaanada kala Bar-sanguuni, malayleey, bandarjadiid ,araare, koban, bangeeni & deegaano kale oo ay ku sugnaayeen Al-shabaab. Saraakiisha hoggaamineysay howlgalka Ciidamada ayaa waxaa ay sheegeen in inta uu socday howlgalka lagu dilay 13-xubnood oo ka tirsan Al-shabaab oo ku jireen Saraakiil, waa sida hadalka ay u dhigeen Saraakiisha.. Sidoo kale Saraakiisha Ciidamada DANAB ee Ururka 5-aad guutada 16-aad iyo kuwa daraawiishta Jubbaland…
Dowlada sudan oo ka badbaday Afgembigi …
Afhayeenka Golaha KMG ee haya Talada dalka Sudan, Maxamed Al-Faki Suleymaan ayaa xaqiijiyey in inta badan Saraakiishii ku lugta lahaa Afgembigii la fashiliyey gacanta lagu hayo, marka laga reebo Sargaalkii hoggaaminayey Isku-dayga Afgembiga. Cutub ka tirsan Ciiddanka Gawaarida Gaashaaman ee Taangiyada ayaana ku lug lahaa Afgembigii la fashiliyey. Warar ayaa waxay sheegayaan in Saraakiil taabacsan Madaxweynihiihore ee hore ee dalkaasi, General Cumar Xasan Albashiir, ka dambeeyeen Isku-dayga ay ku doonayeen inay kula wareegaan Xarumaha Warbaahinta Qaranka ee Suudaan. Sarkaal Sare oo ka tirsan Dowladda Suudaan oo la hadlay Wakaalladda Wararka AFP ayaa sheegay inay Saraakiisha ku fashilmeen inay qabsadaan Xarumaha…